သုက်ပိုးနဲ့ သုက်ရည်အကြောင်းကို ဂဃနဏနားလည်ထားမယ်ဆိုရင် မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး၊ ပဋိသန္ဓေတားခြင်းနဲ့ လိင်မှုကိစ္စတွေမှာ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်မှာပါ။
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, လိင်ကတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများအကြောင်းနှင့် လိင်ဆက်ဆံမှုကနေတဆင့် ကူးစက်သော ရောဂါများအကြောင်း နိုဝင်ဘာ 30, 2020 .2mins read
အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းဟာ ကိုယ်ခံအား၊ စိတ်ကျန်းမာရေး၊ ဟော်မုန်းဆိုင်ရာ ရောဂါများ၊ အရေပြားပြဿနာ၊ ကင်ဆာ စတဲ့ရောဂါတွေ ဖြစ်ပွားခြင်းနဲ့လည်း ဆက်စပ်နေပါတယ်။
အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများ, ကျန်းမာရေးစင်တာ နိုဝင်ဘာ 12, 2020 .2mins read
သက်သက်လွတ်စားတာဟာ ပိုကျန်းမာစေတယ်၊ ကိုယ်အလေးချိန် သိသိသာသာကျစေတယ်။ ဒါပေမယ့် သက်သက်လွတ်စားရင်း လွဲမှားနေကြတာလေးတွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။
ကျန်းမာစွာ စားသောက်ခြင်း, အခြားအာဟာရဆိုင်ရာနည်းလမ်းကောင်းများ အောက်တိုဘာ 11, 2020 .2mins read
အင်ဆူလင်ဟာ သွေးထဲက ဂလူးကို့စ်ဓာတ်ကို ကိုယ်ခန္ဓာက ရယူအသုံးချနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ အင်ဆူလင်အာနိသင်ထိရောက်မှုနည်းသွားရင် ဆီးချိုဖြစ်နိုင်ခြေများပါတယ်။
ဆီးချို သွေးချို, အမျိုးအစား (၂) ဆီးချို စက်တင်ဘာ 15, 2020 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဒီဇင်ဘာ 23, 2020 .3mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဒီဇင်ဘာ 8, 2020 .3mins read